Musharaxii dowladda wadatay oo ugu dambeyn iska diiwaan geliyay Guddiga doorashada - Jowhar Somali news Leader
Home News Musharaxii dowladda wadatay oo ugu dambeyn iska diiwaan geliyay Guddiga doorashada
Musharaxii dowladda wadatay oo ugu dambeyn iska diiwaan geliyay Guddiga doorashada
Axmed Cabdi Kaariye oo loo yaqaano Axmed Qoor Qoor Musharaxa Madaxweynaha Galmudug ayaa maanta iska diiwaan geliyay Guddigii doorashada Madaxweynaha iyo Madaxweyne Kuxigeenka Galmudug ee kala qeysbamay.
Guddiga 8-da xubnood ee uu taageersanaa Guddoonka cusub ee Baarlamaanka Galmudug ayaa sii waday howsha diiwaan gelinta Musharaxiinta, iyadoo uu taagnaa khilaaf ka dhashay hannaanka doorashada iyo kala qeybsanaanta Guddiga dhexdiisa ah.
Axmed Qoor Qoor oo ah Musharaxa dowladda wadatay ayaa maanta iska diiwaan geliyay Guddiga Doorashada ee 8-da xubnood ah, iyadoo la siiyay shahaadada Musharaxnimo.
Mr Qoor Qoor ayay u badan tahay inuu ku guuleysan doono doorashada uu muranka badan ka taagan yahay, ee ay qaadaceen Musharaxiinta ugu tunka weynaa, waxaana calaamad su’aal ka taagan tahay tartanka uu geli doono oo ah mid natiijadiisa ay iska cadahay, maadaama Musharaxiinta kale ee is diiwaan geliyay ay ahaayeen kuwo mar dambe is sharaxay oo Musharaxnimadooda ujeeddo laga lahaa, si aanay u dhicin Musharaxa dowladda wadato inuu keligios tartamo.
Dhinaca kale waxaa 5-ta xubnood ee ka go’ay Guddigii doorashada 8-da ahaa ay iyana wadaa diiwaan gelinta Musharaxiinta Madaxweynaha, waxaana muuqata jawi kale oo Dhuusamareeb kaga suura geli karto doorasho labaad.